Nin aaday isbitaalka ka dibna ogaaday inuu haween yahay (Sheeko dhab ah iyo sida ay ku dhacday) – Filimside.net
Nin 66 sanno jir ah oo u dhashay Shiinaha ayaa wuxuu soo helay natiijadii adduunka ugu murugada iyo yaabka badneyd iyadoo loo sheegay inay xaqiiqadu tahay inuu haweeneey yahay, ka dib markii uu booqday isbitaal ku yaalla Hong Kong sababo la xiriira barar dhanka caloosha ah.
Ninkaan ayaa wuxuu lahaa timaha wejiga, sida garka oo kale, laakiin dhakhaatiirta isbitaalka Kwong Wah Hospital ee ku yaalla Hong Kong ayaa u sheegay in laga helay waxa loo yaqaanno Ovarian Cyst oo ah boog hooseed dumarka laga helo, taasoo la micno ah inay xaqiiqadu tahay inuu haween yahay.
Ninkaan ayaa waxaa sidoo kale ku dhacay laba cudur oo qariib ah, waxaana baaritaan lagu sameeyey lagu ogaaday inuu qabo cudurka Turner Syndrome, waana cudur qariib ah oo laga helo hal gabar oo ka mid ah 2 kun oo gabar oo kasta.
Xogta la xiriirta caafimaadka ninkii isbitaalka yimid ka dibna helay natiijada ah inuu haween yahay ayaa waxaa lagu daabacay joornaalka Hong Kong Medical Journal.
Waxayna arrintaani noqotay mid amakaag ah, iyadoo Shiinaha oo dhan aad looga hadal qaaday ninkaan aan magaciisa la shaacin, lahaa muuqaalka rageed ee markii dambe ogaaday inuu naag yahay.